Juunyo, 2008 cadastre, egeomates My, Maamulka Land, topografia
Halkan waa shaxanka shirarka oo aan ku siiyay, oo ku saabsan caleemo badan oo badan, xidhiidhkiisa iyo cadeymaha Cadastre 2014 iyo qalloocyo kale.
Inkasta oo ay dareemayso inay wanaagsan tahay in lagu muujiyo PowerPoint, halkan waa qaar ka mid ah gabagabada:
1 Waxaan u naqaanno "Ujeeddo"
Dood-wadaagnimada bani'aadamka waxaa loo aaneeyey muddo in ka mid ah, si kastaba ha noqotee waa in la kala soocaa hanaannada u gaarka ah ee loo yaqaan 'cadastre' iyo habka loo mideysan karo ee loo yaqaan "ujeeddada." Sababtaas awgeed waxaa muhiim ah in la kala saaro waxa aan ku kacno (qaab ahaan), waxa aan qabanno (codsi) iyo faa'iidooyinka aan dhammaanteen ku yeelan doonno dhammaadka (hab dhameystiran)
Habka Nabadgelyada waxaa diiradda saaraya ujeedooyinka gaarka ah ee cadastaradu u yeelan karto, sida xisaab, sharci, dhaqan dhaqaale iyo isticmaalka dhulka (oo ay ka mid yihiin).
Habkaani wuxuu u baahan yahay in si cad loo qeexo, sababta oo ah waxay inta badan ku jirtaa gacanta "farsamoyaqaannada" iyo "fikirka" waa inay saameyn ku yeeshaan si aan loo qalloocin. Macnaheedu maahan in "farsamayaqaannada" aysan lahayn awood ay ku fakaraan, laakiin heerkan maahan doorkooda, sidaa darteed sahamiyaha waa inuu cabiraa dhulkiisa, digitizer wuxuu sawiraa khariidadda, barnaamijiyahana wuxuu qoraa qoraalka ... dhammaantoodna si wanaagsan ayey u shaqeeyaan, sida ku cad nidaamka
Araajida marka loo eego habka loo yaqaan 'thematic treatment', kuwani badanaa waxay ku jiraan gacanta «fikrado xirfad leh»Taas oo raadineysa xiriirkooda siyaasadaha dhuleed iyo halista ay wajahayaan waa saameynta waxyeelada leh ee danaha diimeed ama siyaasad siyaasadeed ee dowladda.
Habka maaliyadeed waxaa laga yaabaa in loo isticmaalo ururinta iyo e-dawlada
Habka dhaqan-dhaqaale ku wajahan qorshaynta dhaqaalaha iyo horumarka
Habka sharciga ah xagga isdhexgalka iyo isdhexgalka hay'adaha
Isticmaalka dhulka ku saabsan amarka dhuleed iyo dib u soo kabashada raasumaalka.
Habka guud, kuwaas oo ah natiijooyinka codsiyada cadawnimada ee loogu talagalay hagaajinta xaaladaha nololeed ee bini-aadannimada. Inkastoo aysan aheyn sida toosan sida garaafkayaga, waxaan arki karnaa in:
Ururinta iyo e-dawladdu waxay raadinayaan waxtarka adeegyada
Horumarka dhaqaalaha ee deegaanka iyo qorshaynta ayaa horseedi kara abuurista siyaasadaha dadweynaha
El Amar dhuleed iyo dib u soo kabashada raasumaalka ayaa horseedaya Horumar waarta.
Iyo joogteynta iyo isdhexgalka hay'adaha ayaa horseedaya amniga sharciga ah.
Waxaa laga yaabaa in tani ay tahay tan ugu murugsan maxaa yeelay waa inay ku jirtaa gacanta "istaraatiijiyadda" kaasoo u horseedi doona go'aanno heer qaran, heer gobol ama mid fudud. maamulka degmada. Mid ka mid ah dhibaatooyinka ay waaweyn waa la'aanta ah ee qorshaha istaraatiijiga ah in ku siin kara tilmaamaha in la raaco iyo jaangooyooyin cad cad ee xiriirka hay'adaha ma uu qalloocin in geedi socodka waddada ama caado xun la istiraatijiyadda qaar ka mid ah ka dhigi bandhig tjenesten u qurux badan oo aad u yar ku qor . Haddii ay sidaas tahay waxa aan dooneyno, si degdeg ah ama waqti dambe aan la qaban doonto hawlaha aan our awood ama aanay awoodin in la joogteeyo muddo dheer waa laga badiyay.
2 Immisa ayey ku habboon tahay "isku-dhufasho"
Haddii aan fiirsanno, fikradda "isku-dhafan" oo kama-koobna kama koobna "quanta xogta»Wuxuu leeyahay diiwaanka cadastral, laakiin wuxuu leeyahay« inta isticmaale »ayaa isticmaali doona.
Tani waa sababta ay tahay in duubista "isugeynta bulshada" aysan ugu koobnaan macluumaad fara badan, laakiin mid leh adeegyo badan. Markaa fikradda hagida mowduucyada la adeegsado ayaa lagu ciyaaraa, sidaa darteed laba hay'adood ma nuqulaan karaan macluumaad ama dadaal laakiin in kasta oo qofku baaro, waa mas'uuliyadda midka cusboonaysiin kara.
3 Markuu "isku-ekaanta" buuxiyo
Haddii aan wax badan la soo noqon, waa la fuliyaa marka qaababka hadda jira ee la xiriira ay midba midka kale ula xiriiraan, haddana ogow inaan dhahayo "xiriir" maxaa yeelay tani uma baahna aalado kombiyuutar, laakiin nidaamyo ... xitaa haddii taasi ay ku lug leedahay soo diritaanka dukumiinti warqad ah. Halkan waxaa mudan in la xuso taas Khuraafaadka Cadastre 2014 waa in la buuxiyaa ilaa inta ay hey'adaha casriyeynayaan iyo automation ay ku soo baxayaan ... dhinacan ee Pyrenees 🙂
Marka si loo bilaabo cadastre waxay u baahan tahay caddeyn hay'ad iyo joogtayn; Tani waa sababta qaar badan ay uga bilaabaan cadastre qaab maaliyadeed, oo haddii ay fuliso "xiriirkooda" waaxda xakameynta canshuuraha, u oggolaato qawaaniinta qiimeynta + qiimeynta inay u horseeddo hufnaan xagga bixinta adeegyada; Kadibna wuxuu fulinayaa kaalintiisa badan.
Tilmaamuhu waa in haddii aad rabto in aad marwalba u qaadato marxaladaha kala duwan, waxaanu helaynaa xaashida baaxadda xaashida, kakanaanta shuruudaha saxda ah iyo marka aan rabno inaan dhisno nidaamka… waxaa jiri doona qeylo dhaan ah oo ay ka maqan tahay “xog lama huraan ah” ama xaaladdu ugu xun tahay, macluumaadka ayaa laga gudbi doonaa.
... 45 daqiiqo i waafajiyo mawduuca, laba farsamo i aragtay indhaha MegamanX iyo ku-xigeen oo isku xigta ee la soo dhaafay dhacay bandhig qeybtii hurda ... Anyway, halkan waxaa sigaar cabbin si aad u hesho ii dib casuumay ... iyo rajaynaynaa oo keliya in laga bilaabo GB Ma la iiga toogan doono 🙂
Post Previous«Previous Sida loo sameeyo IMS la Manifold GIS
Post Next Muxuu naga tagay june?Next »
3 Jawaab "Geofumadas: de Cadatas Multifinalitario"
Manuel Quintero isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan rumeysanahay in ku guuldareysiga mashruucan inuu yahay raadinta isku xirnaansho, laakiin fikrad ku filan ayaa noqon doonta tan oo ah INTEGRATED CATASTRO horumarka qaran. Sidan, taageero ayaa loo fidin doonaa hay'adaha dowladda, iyada oo loo sii marayo xogta aan u cusbooneysiin karno si mas'uuliyad leh isla markaana aan u sii ilaalin karno ilaalintooda waqti ka dib.
Xaaladda qorshaysan ee baaritaanka kaasoo alaabtiisa loo adeegsan doono ujeedooyin kala duwan iyo hay'ado kaladuwan ayaa lagu qeexi karaa "midabbo badan".
Sidaa daraadeed waxaan dhihi karnaa cadawga ujeedada badan:
Waa cadastre in sheygankiisa loo isticmaali doono saldhig macluumaad oo loogu talagalay ujeedooyin kala duwan ee hay'adaha kala duwan, sidaas darteed naqshadaynta cilmi-baaristanada waxaa ku jira qaybaha asaasiga ah ee danta guud.
Luis Alfonso Ortiz Gomez isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u baahanahay inaan ogaado qeexida saxda ah ee dadka badan. Tani waa sababta oo ah waxaan isku duba rideynaa dukumenti warbixineed oo ku salaysan qoraallo ay soo diyaariyeen waaxyo kala duwan, Waad ku mahadsan tahay.